Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 11)
Manhattan waxay horey u laheyd istuudiyaha raadiyaha Beats1
Eedeysane cusub oo loo yaqaan Celebgate ayaa lagu helay dambi ah aqoonsi iyo xatooyo xog shaqsiyeed waxaana lagu xukumay 34 bilood oo xabsi ah.
Agaasimaha Guud ee Super Micro wuxuu ku biirayaa Tim Cook dalabashada Bloomberg Retract
Laba toddobaad ka dib markii la daabacay maqaalka Bloomberg ee sheeganaya in Apple ay isticmaaleyso looxyo Super Micro ah oo leh jajab basaasnimo, labada shirkadoodba waxay ku biireen xoogagga si ay uga dalbadaan inay ka noqdaan.
Apple waxay bilaabi kartaa iPad mini cusub sanadkaan, saldhigga AirPower iyo AirPods 2 dhowr bilood gudahood
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha Ming-Chu Kuo, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay soo bandhigi kartaa jiil cusub, kii shanaad, ee iPad Mini.
Falanqeeyayaashu way saxnaayeen: iPhone XR waqtiga maraakiibta ayaa dib udhacay wixii ka dambeeyay Oktoobar 26
Miyaad ka fekereysaa inaad hesho iPhone XR soo socota Oktoobar 26? Waqtiyada rarka ayaa hadda la dejiyay inta udhaxeysa 1 iyo 2 toddobaad ...
"Beautygate" waxaa lagu hagaajin doonaa iOS 12.1
Beautygate wuxuu ku dhow yahay dhamaadka iyada oo la cusbooneysiinayo iOS 12.1 kaas oo hagaajiya cayayaanka "filterka quruxda" marka la qabanayo sawirada
Iibso iPhone-kaaga isla markaaba ku iibso muuqaalka cusub eBay
Fikradda cusub ee suuqa ugu caansan waxay noqotay in la bilaabo Iibinta Degdegga ah, oo ah adeeg kuu oggolaanaya inaad isla markiiba iibiso taleefankii hore ee casriga ahaa.
App Store wuxuu abuuri doonaa 2.000 billion sanadka 2020
Sida laga soo xigtay xogtii ugu dambeysay, App Store waa inuu abuuri lahaa ilaa $ 2.000 bilyan oo dakhli ah sanadka 2020.
Dayactirka IPhone XR wali waa qaali
Amarada hore ee iPhone XR ayaa horeyba u bilaabay. Apple sidoo kale waxay daabacday qiimaha dayactirka ee xaaladaha kala duwan ee qalabkan.
Apple waxay soo saari kartaa taxane TV ah oo ku saleysan iibiyaha 'Pachinko'
Warka ayaa noo imanaya in Apple ay heshay xuquuqda sheekada Pachinko ee ah inay u qaadato taxanaha TV-ga ee adeegga fiidiyowga ee internetka.
Telegram wuxuu mar kale ka muuqanayaa Apple Watch
Ka dib markii uu ka noqday murankii dalabka ee loogu talagalay Apple Watch, Telegram wuxuu ku soo celiyaa Bera-kiisii ​​ugu dambeeyay oo leh waxqabad aad u wanaagsan
IOS 12.1 Beta 5 Hada Loo Heli Karo Horumarinta
Apple ayaa hadda sii deysay macruufka cusub ee 5 Beta 12.1, iyo sidoo kale watchOS 5.1 iyo tvOS 12.1 oo loogu talagalay kuwa horumariya, oo leh eSIM iyo emoji cusub.
WhatsApp waxaa lagu cusbooneysiiyay interface cusub fariimaha iyo taageerada iPhone XS Max
Codsiga farriinta WhatsApp ayaa hadda la cusbooneysiiyey oo muujinaya is-dhexgal cusub marka ay timaaddo muujinta xulashooyinka la heli karo ee lagula falgeli karo farriimaha
Apple wuxuu siiyaa kuwa jecel bagel waxayna dib u qaabeeyaan emoji ka wakiil ah
Rootiga qamadiga ee Polish-ka ee loo yaqaan bagel ayaa dib u habayn lagu sameeyay cabashooyinka isticmaalayaasha qaarkood ee ku jira liiska emojis.
Oppo waxaa lagu ugaarsaday iyadoo la been abuurayo astaamaha u gaarka ah qaabka 'Find X iyo F7'
Moodooyinka Oppo Find X iyo F7 ayaa lagu ugaarsaday iyadoo la been abuurayo jaangooyooyinka sidaas darteedna waa looga saaray qiimeynta.
Gaari iskiis u wada oo Apple ah ayaa shil galay Oktoobar 15
DMW waxay xaqiijisay in Oktoobar 15, gaari Lexus ah oo hoos yimaada ismaamulka iswada ee teknolojiyadda Apple uu shil ka dhacay California.
Maxaa ka maqan Apple TV si loogu guuleysto madal ciyaarta fiidiyowga ah
Telefishanka Apple TV kuma dhammeeyo curdinka inuu yahay madal ciyaarta fiidiyowga ah waxayna umuuqataa mid sii kordheysa oo ay adagtahay in lagu guuleysto, in kasta oo ay awood weyn leedahay
Apple waxay dhiirrigelisaa barnaamijyo cusub oo adeegsada isdhexgalka dariiqooyinka 'Siri shortcuts'
Si aan u ogaanno dhammaan fursadaha tuurista 'Siri', Apple waxay dhiirrigelineysaa barnaamijyada ugu wanaagsan ee adeegsada ugubkan.
Wax is daba marin ku saabsan qiimeynta kuwa ugu dhageysiga badan ayaa la xaqiijiyay
Dhowr toddobaad ka hor, waxaan ku celcelinnay sheeko sheegeysa oo sheegaysa in darajooyinka podcast ...
Munaasabada soo bandhigida ee iPad-ka cusub ayaa si toos ah looga baahin doonaa
Qodobka muhiimka ah ee Oktoobar 30, kaas oo Apple ay ku soo bandhigi doonto iPad Pro cusub iyo cusbooneysiinta MacBook Air iyo Mac Mini, ayaa si toos ah loola socon karaa websaydhka Apple.
Mophie Powerstation 3XL wuxuu la yimid USB-C
Baytariyada dibedda ayaa macno badan samaynaya markay yimaaddaan USB-C. Dekedani waxay noqotay halbeega ...
Noocyada iPhone XS waxay bixiyeen xog iibsi wanaagsan
Qiyaasahaani waxay soo jeedinayaan in iPhone XS iyo iPhone XS ay ku jireen caafimaad iib wanaagsan tan iyo markii la bilaabay.
Jony Ive wuxuu wareysigiisa ku xaqiijinayaa in ujeedkiisu yahay inuu sii joogo Apple
Waxay ahayd wareysi lala yeeshay majaladda WIRED halkaas oo Jony Ive uu ku falanqeeyay xirfaddiisa Apple isla markaana uu xaqiijiyay inuu ku dhiirrigelinayo inuu la sii joogo shirkadda.
Apple wuxuu xaqiijinayaa Oktoobar 30 wixii muhiim ah ee soo socda!
Apple horeyba waxay kuu ogolaaneysaa inaad kala soo baxdo macluumaadkaaga shaqsiyeed wadamada qaarkood
Hadda Apple waxay ku siineysaa boggeeda internetka awood u soo dejinta xogtayada gaarka loo leeyahay xulasho dalal ah.
Ming-Chi Kuo, wuxuu saadaalinayaa imaatinka hawlgalayaasha ARM ee Macs sanadka 2020 ama 2021
Apple waxay raaligelin siineysaa dadka isticmaala Shiinaha ee xatooyada ID-yada Apple
Podcast toddobaadle ah oo aan ku falanqeyno wararka usbuuca ee adduunka tiknoolajiyada, gaar ahaan waxa ku hareeraysan Apple iyo alaabteeda.
Tani waa waxa shaashadda cusub ee iPad Pro u ekaan laheyd iyadoo loo eegayo bixinta laga soo saaray soo saaraha qalabka
Toddobaadyo gudahood waxaa laga yaabaa inaan aragno iPad Pro cusub. Soo-saaraha qalabka ayaa sii daayay abaalmarin muujineysa sida ay u ekaan karaan.
Natiijooyinka dhaqaale ee ay Apple ku dhawaaqi doonto bisha Nofeembar 1, waxay u maleyn kartaa hoos u dhac weyn sababo la xiriira suuqa Aasiya.
Apple waxay iibsataa Asaii, shirkad aan la kulmi karno Michael Jackson ee soo socda
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay iibsatay shirkadda Asaii, oo ah shirkad ku mahadsan tiknoolajiyadeeda barashada mashiinka, u oggolaanaysa inay la kulanto fanaaniinta waaweyn ee soo socda.
Naagigga 'Sygic GPS' wuxuu bilaabayaa cusbooneysiinta u oggolaaneysa isticmaalkeeda Apple CarPlay
Ragga ka socda Sygic waxay aakhirkii bilaabeen iswaafajinta ay GPS navigator la leeyihiin nidaamka Apple ee nidaamka CarPlay si aan ugu adeegsan karno gaariga.
Khariidadaha Apple ayaa sii wanaajinaya shirkadduna waxay ku kordhisay baabuur cusub
Apple waxay si adag u dhaleeceyneysaa sharciga Australia ee kahortaga sirta
Hindisaha dowladda Australia wuxuu joojin karaa amniga ay Apple naga siiso aaladeeda
TSMC ayaa mas'uul ka noqon doonta soosaarida qalabka A13 ee iPhone-ka soo socda
Apple waxay ku kalsoonaan doontaa TSMC sanad kale inay soo saaraan jiilka xiga ee processor-ka kaas oo maamuli doona iPhone iyo iPad ee soo socda, A13
Facebook wuxuu hadda noo ogolaanayaa inaan ku qaadno sawirro 3D ah sawirrada aan ku qaadno qaabka sawirka
Sawirada 3D waxay gaaraan shabakada bulshada ee Facebook. U adeegso sawirradaada lagu qaaday qaabka sawirka si aad u aragto sida ay ugu socdaan darbigaaga.
Bakhaarka Covent Garden Apple Store inuu ku furmo iPhone XR Launch
Apple wuxuu diiwaangeliyaa moodooyinka cusub ee iPad Pro ee Shiinaha
Apple waxay diiwaangalisay noocyo cusub oo iPad Pro ah iyo "aaladda Bluetooth" oo ay ka diiwaan galisay Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada Warfaafinta ee Shiinaha.
Muuqaalka Luna, oo ah qalab noo oggolaanaya inaan u isticmaalno Ipad-keena sidii shaashad labaad oo loogu talagalay Mac, hadda waa la heli karaa
Qalabka 'Display Display' ee 'Luna Display' oo noo ogolaanaya inaan ku xirno iPad-keena iPad-ka si aan ugu isticmaalno sidii shaashad labaad ayaa hadda laga heli karaa suuqa
Sawirrada Google waxay noo oggolaaneysaa inaan si toos ah ugu abuurno albamka dadka iyo xayawaanka
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Sawirrada Google ee loogu talagalay macruufka, waxay noo oggolaaneysaa inaan la abuuro albums dad iyo xayawaan si otomaatig ah iyada oo aan lagu darin qabashada cusub ee aan qaadanno.
WhatsApp-kaaga ayaa la jabsan karaa kaliya ka jawaab celinta wicitaan
Aynu eegno hanjabaadan cusub, xogtaada waxaa wax u dhimi kara fashilka WhatsApp oo kaliya adigoo wicitaan qaata.
Xilli ciyaareedkii labaad ee Carpool Karaoke wuxuu bilaaban doonaa 12-ka Oktoobar
Xilli ciyaareedkii labaad ee Carpool Karaoke horeyba wuxuu u lahaa taariikh sii deyn ah. Waxay noqon doontaa Oktoobar 12 markaan ku raaxeysan karno qeybaha cusub.
Dropbox waxay hagaajineysaa «barashada mashiinka» si ay uga hesho nuxurka qoraalka PDF iyo sawirrada
Isdhexgalka tikniyoolajiyada barashada mashiinka ee 'Dropbox' waa la hagaajiyay iyadoo ay ugu wacan tahay tikniyoolajiyadda OCR.
Apple Music wuxuu ku biirayaa barnaamijka Jimmy Kimmel Live! si loogu dhiirrigeliyo fannaaniinta soo baxaya barnaamijka 'Up Next'
Ragga ka socda Apple Music waxay rabaan inay ku dhiirrigeliyaan farshaxanno cusub bandhigga 'Next Next' oo ay weheliyaan ragga ka socda ABC ee Jimmy Kimmel Live!
Apple waxay ku guuleysatay yareynta khayaanada dammaanadda ee Shiinaha
Sida muuqata dhowr sano ka dib Apple waxay ku guuleysatay inay si weyn u yareyso tirada dadka khiyaaneeya adeegga dammaanadda.
Ubiquiti waxay dib u cusbooneysiineysaa qiyaasta AmpliFi iyadoo la soo saaray shey cusub
Hada Ubiquiti waxay bilaabeysaa AmpliFi Instant Mesh WiFi System si ay u bixiso balaadhinta shabakadaada wax kayar laba daqiiqo iyo tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay.
Cusbooneysiinta dayactirka, waxay ku darsataa jaantusyada iOS 12 waxayna hagaajineysaa ogeysiisyada
Hadda Spark wuxuu ku kordhiyay cusbooneysiin weyn oo ku daraya iOS 12 tuuryo iyo hagaajiya cusbooneysiinta iyo arrimaha ogeysiinta qaarkood.
Waxaan ku falanqeyneynaa xaaladda hadda jirta ee kuwa ku hadla caqliga leh khabiir sida Pablo Guerrero. Tayada codka ama astaamaha caqliga lihi miyay tahay in laga hormariyo?
Google wuxuu ku dhawaaqayaa isbeddelada asturnaanta sababo la xiriira daadinta weyn ee Google ee aysan sheegin
Google + ayaa la kulantay weerar kaas oo waxyeelleeyay macluumaadka nus milyan qof, Google ayaa ku dhawaaqday ka dib markii ay soo bandhigtay mashruuceeda cusub.
Maxaa ka cusub Google sanadka 2018: Pixel 3, Pixel 3XL, Google Hub iyo Google Pixel Slate
Haddii aadan awoodin inaad ku raaxeysato dhacdada alaabada cusub ee Google ee sanadka 2018, qodobkaan waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa dhammaan riwaayadaha la soo bandhigay: Pixel 3 XL, Google Home Hub iyo Google Pixel Slate
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 12.1 Beta 3 oo ay weheliso watchOS 5.1 iyo tvOS 12.1
Apple wuxuu sii daayay iOs 12.1 Beta 3, oo ah nooc kale oo tijaabo ah oo ah cusbooneysiintan soo socota oo ay ku jiraan qaar ka mid ah astaamaha cusub ee horey loo soo bandhigay.
IPad-kan soo socda ayaa la imaan doona Face ID, USB-C, iyo Apple Pencil 2 oo cusub
Sirta iPad-ka cusub ayaa lasoo saaray ... Aqoonsiga Face-ka ayaa imaan doona ipad-yada cusub oo ay weheliyaan USB-C oo noo ogolaanaya inaan isticmaalno shaashadaha dibada.
British Telecom waxay kala xaajooneysaa Apple inay Apple TV 4K siiso adeegsadayaasheeda
Munaasabadan, British Telecom waxay la shaqeyneysaa Apple si ay u siiso adeegsadayaasheeda Apple TV iyo waliba waxyaabo gaar ah.
Raac "Antennagate" oo isticmaaleyaal badan ayaa soo celiya iPhone XS
Waxa looyaqaano AntennaGate 2 wali weyjiraan, waxbadan sidaa darteedna waxay kusii fideysaa sidii xumbo golayaasha khaaska ah.
Tiknoolajiyada Ultrasonic waxay hagaajin kartaa qalinka Apple
Apple waxay dhexgeli kartaa tiknoolajiyada ultrasonic si loo hagaajiyo sida horumariyayaashu u isticmaali karaan qalinka Apple: hagaajinta iyo kordhinta saxnaanta.
Dakhliga Fortnite wuxuu gaarayaa $ 300 milyan iOS
Ciyaarta moodada ee ku taal iOS wali waa Fortnite sida lagu caddeeyey xogta dakhliga ee codsigu soo saaray tan iyo markii la bilaabay.
Apple wuxuu kaqeybqaadan doonaa dhacdada aduunka ee Big Draw oo leh kalfadhiyo gaar ah oo lagu sawirayo Dukaanka Apple
Apple wuxuu ku biirayaa ragga ka socda The Big Draw isagoo kaqeyb galaya kalfadhiyada barashada sawirada dhamaan Dukaamada Apple ee maanta ku jira barnaamijka Apple.
Processor-ka Apple ee A12 Bionic wuxuu labalaab ka dhakhso badan yahay Snapdragon 845
Marka loo eego xisaabinta bilowga ah, A12 Bionic waa labo ilaa saddex jeer ka dhaqso badan processor-ka ugu wanaagsan ee Qualcomm suuqa ku yaal maanta.
Spotify ayaa kuu oggolaan doonta inaad soo dhejiso Podcasts-kaaga oo aad u hanjabto Apple Podcasts
Hadda Spotify ayaa u oggolaan doonta isticmaale kasta inuu soo dhejiyo qoraalkooda, inkasta oo hadda ay ku jirto beta muddo.
Kuwani waa 10ka adeegsi ee ugu sarreeya ee adeegsadayaashu ka sameeyaan Apple Watch
Haddii aad wali shaki ka qabtid waxa saacadda Apple Watch ay waxtar u yeelan karto, sahankan waxaad ku ogaan doontaa waxa ay yihiin isticmaalka ugu badan ee adeegsadayaasha
Apple ayaa weli ah shirkadda adduunka ugu qiimaha badan sanadkii lixaad oo xiriir ah
Sanadkii lixaad oo xiriir ah, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa mar kale hogaanka u haysa liiska shirkadaha ugu qiimaha badan adduunka.
Facebook wuxuu isku dayaa inuu ku iibsado taariikhda Instagram shabakadiisa bulshada
Hawsha cusub ee 'Instagram' waxay khatar gelinaysaa asturnaanta iyo diiwaangelinta goobaha ay arjigu kaydiyaan, oo ay la wadaagi doonaan Facebook.
Apple ayaa beenisay in adeegsadayaasheeda ay basaasnimo kala kulmaan Shiinaha
Dowladda Shiinaha waxay ku lug lahaan kartaa qorshe basaasnimo iyada oo loo marayo aaladaha lagu soo saaray dalkeeda.
Batariga iPhone XS Max waa wanaagsan yahay, laakiin uma fiicna sida kan Galaxy Note 9
Warbixinnada Macaamiilku way cad yihiin, iPhone XS Max ayaa ku fiicnaaday batariga, laakiin wali way ka fog tahay tan ugu fiican, Samsung Galaxy Note 9.
Amazon waxay ku cusbooneysiineysaa Dabka Dabka HDR10 iyo Dolby Atmos
Amazon ma rabto inay joojiso soosaarka alaabada tikniyoolajiyadeed ee suuqa ka dhigaya gurigeenna mid caqli badan oo ka sii sarreeya ...
Apple Music waxay heshiis gaar ah la gaadhay calaamadda Wasaaradda Codka
Calaamadda muusikada qoob-ka-ciyaarka caanka ah waxay la timaaddaa liis gaar ah oo loogu talagalay Apple Music si kor loogu qaado buugga muusikada ee Apple.
Isticmaalayaasha Barnaamijka Cusbooneysiinta IPhone waxay ku keydin karaan iPhone XR iyaga oo adeegsanaya toobiyeyaasha
Apple ayaa cusbooneysiisay barnaamijka Apple Store si loogu daro Siri Shortcuts taasoo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha Barnaamijka Casriyaynta iPhone inay keydiyaan iPhone XR.
Apple waxay ku dhawaaqi doontaa natiijooyinkeeda maaliyadeed 1da Nofeembar
IOS 12 ma u fiicanyahay sidii aan filaynay? Waa sida ay maanta tahay
Dhowr toddobaad ayaa laga joogaa markii si rasmi ah loo soo saaray macruufka 12, welina waxaan ku jirnaa qaab ...
Laga soo bilaabo abuurayaasha Bendgate iyo soosaarayaasha Antennagate, Betterygate iyo Beautygate, labada qalad ee halista ah ee iPhone XS, kaalay shaashadahaaga
HomeKit wuxuu bilaabaa inuu yimaado qalabka soo dhaweynta Netamo
Kaamirada soo dhawaynta Netamo waxay bilaabaysaa inay balaadhiso iswaafaqkeeda HomeKit qaab cusboonaysiin ah.
Baadhitaanadu waxay tilmaamayaan isbedel weyn oo ku yimid iPhone XS cusub iyo XS Max
Daraasad cusub oo la daabacay ayaa xaqiijinaysa in 4tii qof ee 10 ka mid ah ay iPhone-kooda u beddelaan iPhone XS iyo XS Max cusub, 39% ka mid ah dadkii la daraaseeyay
iOS 12.1 Beta 2 wuxuu hagaajiyaa waxa loogu yeero "Batterygate"
Apple waxay hagaajisay cayayaanka sababay in aaladaha qaar aysan bilaabin inay soo dalacaan markay isku xirayaan fiilada danabka ee beta labaad ee iOS 12.1
Ma jeceshahay golf? Hagaag, Golf Star waxay umuuqataa ciyaartaada ugufiican
Golf Star waa ciyaar fiidiyoow golf ah oo kuu oggolaan doonta inaad waqti fiican ku hesho habka tartanka ama mashiinka si fudud.
Thanks to dhiirigelinta, ama halkii waajibaadka, ee Midowga Yurub, Apple waxay kudhameysaa bixinta deynta canshuurta ee dowladda Irish.
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu ka dhigi karaa xilliga Kirismaska ​​inuu daawado daawashada dhaqameed
Saacadda cusub, Apple Watch Series 4, ayaa si aad ah u iibin doonta Kirismaska. Shirkadaha waaweyn ee saacadaha ayaa la filayaa inay hoos u dhigaan iibkooda.
Dad faro ku tiris ah oo adeegsadayaasha ah ayaa ka cabanaya in terminalku uusan umuuqan inuu bilaabayo lacag bixinta markii fiilada Lightnign la gelinayo.
Xayeysiinta cusub ee weyn ee loo yaqaan "Growth Spurt" oo muujineysa shaashadaha waaweyn ee ka sii wanaagsan iPhone XS iyo XS Max cusub.
IOS 12.1 beta ayaa wali tilmaamaya iPad Pro soo socda oo leh USB-C
Koodhka ilaha macruufka 12.1 wuxuu sii wadaa inuu tilmaamo soo bandhigida iPad Pro cusub oo leh isku xirnaanta USB-C sababtoo ah xaqiiqda ah inay taageerto bandhigyada 4K.
Mawjadda Siri waxay la socotaa codka codkeenna Apple Watch Series 4
Ragga ka socda Cupertino waxay si layaab leh noogu keydinayaan Apple Watch Series 4 cusub, hadda mowjadda Siri ayaa ku socota codkeenna.
Vodafone xirmada buniga ah ee kuleylka Apple Watch Series 4 LTE
Vodafone waxay mar kale niyad jabineysaa macaamiisheeda iyadoo aysan awood u laheyn inay dhaqaajiso Apple Watch LTE oo aysan siinin wax kale ama sharaxaad ah
Wiil dhalinyaro ah oo udhashay Australia oo jabsaday serverka Apple ayaa ka baxsaday xukun
Ninkii dhalinyarada ahaa ee galayay Apple server muddo labo sano ah, iyagoon ogayn, ayaa laga reebay xukunkii 8 bilood ee lagu xukumay.
Hadda macruufka 12.1 beta 1 wuxuu awood u siinayaa hawlgalka eSIM aaladaha la taageero, sida iPhone XS iyo iPhone XS Max.
Ka dib markii la kala jaray iFixit, waxaa la muujiyay in Apple Watch Series 4 cusub uu leeyahay batteri ka hooseeya Apple Watch Series 3.
Apple Watch Series 4 iyo iPhone XS Max ayaa ka guuleysanaya alaabooyinka kale ee cusub
Warbixinadii ugu dambeeyay ee falanqeeyaha Ming-Chi Kuo waxay xaqiijinayaan in Apple Watch Series 4 iyo iPhone XS Max ay barakicinayaan alaabada inteeda kale.
IPhone XS wuxuu la kulmi karaa "antennagate" kale oo caan ah
Waa hagaag, cabashooyinka ugu horreeya waxay durba soo socdaan waxqabadka guud ee liita ee anteenooyinka iPhone XS.
Apple ugu dambeyntii wuxuu dhameystirey iibsiga Shazam kadib OK ee Ururka
Oggolaanshaha guddiga tartanka Midowga Yurub ka dib, Apple wuxuu dhameystirayaa iibka shirkadda Shazam iyadoo la doonayo in lagu daro dhammaan tikniyoolajiyadeeda.
LTE iyo xawaaraha WiFi ayaa lagu hagaajiyay iPhone XS
Imtixaannadii ugu horreeyay waa kuwo la soo afjaray waana in xawaaraha WiFi iyo xogta LTE ee iPhone XS ay si muuqata u soo hagaagtay.
Miyuu Apple Watch Series 4 dhab ahaantii ogaadaa haddii aad dhulka ku dhacday?
Dhabbaaraha dayrta ee Apple Watch miyuu shaqeeyaa runtii? Aynu eegno tijaabooyinka taxaddar leh ee lagu samaynayo Apple Watch
Ku-xirnaanshaha Fortnite, mid ka mid ah sababaha furiinka sida ku xusan xogtii ugu dambeysay
Balwadda ay dadka qaarkiis u dhibaatoodaan ciyaarta fiidiyowga moodada ah ee 'Fortnite', ayaa waxay bilaabeen inay sabab u noqoto madadaalo Boqortooyada Ingiriiska.
Tani waxay ahayd iibkii ugu horreeyay ee iPhone XS, Apple Watch Series 4 iyo iPhone XS Max
Bishii Sebtember 21, Apple wuxuu bilaabay inuu iibiyo iPhone XS, iPhone XS Max iyo Apple Watch Series 4. Waxay ku wadaageen sawirrada maalintaas shabakadooda.
Waze waa la cusbooneysiiyay oo hadda wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa CarPlay
Waze ayaa hadda la cusbooneysiiyay si ay si buuxda ula jaanqaadi karto Apple CarPlay baabuurta la jaan qaadi karta.
Shaashadda iPhone XS Max waa tan ugu wanaagsan ee abid lagu soo bandhigo taleefannada casriga ah sidaas darteedna waa tan ugu fiican suuqa, taasi waxay ahayd gabagabada DisplayMate.
Iyadoo la adeegsanayo iOS 12.1 waxaan ku kala duwanaan karnaa qoto dheerida aagga sawirada markaan ku qaadaneyno iPhone XS
IOS 12.1 cusub ayaa noo oggolaan doonta inaan si toos ah u beddelno qoto dheerta aagga sawiradeenna markii aan sawirro ka qaadaneyno iPhone XS cusub.
Kadib iibsashada Beddit, adeegga raadinta hurdada, Apple waxay isu diyaarineysaa inay xirto daruurteeda
Apple waxay bilaabaysaa inay gacanta ku dhigto Beddit, oo ah shirkada kormeerka hurdada ee ay la wareegtay sanad ka hor iyadoo xidhaysa adeega Beddit Cloud.
HomePod wuxuu xisaabiyaa 70% iibka afhayeenka dhamaadka suuqa
Xaqiiji sida bilooyinku u socdaan, homePod wuxuu isu taagaa sida ikhtiyaar heer sare ah suuqa afhayeenka caqliga badan.
Koodhka ilaha ee iOS 12.1 wuxuu muujinayaa tixraacyada "iPad2018Fall" oo lagu soo bandhigi karo dhacdo Oktoobar, sida sanado ka hor.
Ka dib markii si rasmi ah loo bilaabay Apple Watch Series 4, wax walba waxay muujinayaan in shaqada cusub ee qalabka koronto-dhaliyaha ay sidoo kale gaari doonto suuqa Kanada.
Kuwani waa aaladaha xiga ee leh Alexa ee ay Amazon soo bandhigtay
Kuwani waa aaladaha cusub ee la imaan doona Alexa oo ka socda Amazon sida ku cad macluumaadkooda ugu dambeeyay, subwoofer-ka iyo waxyaabo kale oo badan.
Ragga ka socda shirkadda caymiska John Hancock waxay rabaan inaan ku xirno Apple Watch gacanteena si aan ula soconno maalinteenna maalin.
IOS 12.1 waxay noo keeni kartaa is waafajinta Memoji inta udhaxeysa qalabkeena
macruufka 12.1 wuxuu noo keeni karaa iswaafajin cusub oo Memoji ah inta udhaxeysa dhamaan qalabkeena mahadsanid iCloud.
Gaabinta ayaa noqotay guul aan horay loo arag oo horeyba ugu soo dusay "sare" ee barnaamijyada bilaashka ah ee laga kaydiray App Store.
Khariidadaha Google ayaa ugu dambayntii taageeraya CarPlay
Dhowr sano oo sugitaan ah kadib, arjiga Khariidadaha Google ayaa hadda laga heli karaa CarPlay. Barnaamijka khariidaynta ee soo socota ee sidaas lagu sameeyo wuxuu noqon doonaa Waze.
Codsiga Telegram waxaa lagu beddeli doonaa Telegram X, oo ah barnaamij ka fiican isticmaalka batteriga iyo waxqabadka
Laba toddobaad gudahood, sida uu soo sheegay madaxa Telegram, Pavel Durovx, Telegram X ayaa beddelaya Telegram.
IOS 12.1 Beta 1 waxaa ku jira wicitaanada Kooxda FaceTime iyo Aqoonsiga Joogtada ah
Beta ugu horreysa ee iOS 12.1 waxaa ku jira astaamo cusub sida wicitaano kooxeed loogu talagalay FaceTIme iyo iPad Pro suurtagal ah oo leh taageero loogu talagalay Aqoonsiga Aqoonsiga.
Podcast 10 × 03: Caprice ama iibsasho caqli badan?
Toddobaadkan waxaan ka hadlaynaa moodooyinka kala duwan ee iPhone-ka, haddii ay mudan tahay in la cusbooneysiiyo iyo in kale iyo noockee xiiso badan yeelan kara.
Munaasabadda soo bandhigida ee iPhone-ka cusub ayaa hadda laga heli karaa YouTube
Haddii aadan weli eegin muuqaalka soo bandhigida iPhones-ka cusub, horeyba waad ugu sameyn kartaa adoo adeegsanaya websaydhka Apple ee YouTube-ka.
Apple TV Remote sidoo kale waa la cusbooneysiiyaa iyadoo dib loo qaabeynayo isku xirkeeda
Hadda Apple TV Remote waxaa lagu cusbooneysiiyay isdhexgal dib-u-habeyn leh, awood sir ah oo ka mid ah howlaha kale ee xiisaha leh.
Ming-Chi Kuo wuxuu rajeynayaa iPhone XR iyo XS Max inay ku guuleystaan ​​XS
Saadaalinta falanqeeyayaasha caanka ah ee Ming-Chi Kuo waxay saadaalinayaan guulaha iibka ee kudhowaad 75-80 milyan oo iphone ah oo lagu iibiyay wareeggan cusub.
Gawaarida ayaa u imanaya iOS App Store oo si joogto ah u beddelaya Hawsha Shaqada
Waxaan ku helnay barnaamijka 'App App' ee App-ka 'Shortcuts application' oo si rasmi ah u beddelay Shaqo-socodka taas oo hagaajin doonta awoodaha 'Siri'.
IOS 12 waxay luqadda Isbaanishka u keentaa HomePod iyo warar badan oo dheeri ah
IOS 12 waxay keeneysaa HomePod suurtagalnimada in lagu isticmaalo Isbaanishka iyo sidoo kale shaqooyin kale oo xiiso leh sida wicitaanada ama saacadleyda.
iOS 12 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo oo loo cusbooneysiiyo qalabkaaga
IOS 12 hadda waa la heli karaa si loo soo dejiyo ka dib bilooyin tijaabo ah. Ku cusbooneysii iPhone-ka iyo iPad-ka nooca ugu dambeeyay hadda wixii ka dambeeya.
Tixraaca Apple Watch 4: 98% Baaritaanka Lagu Kalsoon Yahay Fibrillation Atrial
Saacadda cusub ee Apple waxay awood u leedahay inay aqoonsato Atrial Fibrillation iyadoo lagu kalsoonaan karo 98% sida ku cad daraasadihii ugu dambeeyay.
Xiriiriyahaani wuxuu xiri doonaa iPad-kaaga ama iPhone-ka taasoo keeneysa in dib loo bilaabo
Khaladkani wuxuu sababayaa in iPad-kaaga uu si buuxda u burburo oo uu si joogto ah dib ugu bilaabo sabab la’aan.
Pandora Music waxay isu diyaarineysaa imaatinka 'Siri Shortcuts' ee iOS 12
Barnaamijka Pandora Music ayaa la cusbooneysiiyay si loogu diyaar garoobo imaatinka iOS 12 iyo Siri Shortcuts, sidoo kale lagu dhawaaqayo barnaamijka Apple Watch.
Apple waxay daabacday warbixinteeda kooban ee fiidiyowga ah oo laba daqiiqo ah oo ku saabsan dhammaan wararka lagu soo bandhigay khudbadda Apple Park maalmo ka hor
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin farqiga udhaxeeya iPhone XS iyo iPhone XR, labada nooc ee cusub ee taleefanka Apple.
IPhone XS oo leh A12 Bionic chip wuxuu leeyahay 4GB RAM
Macluumaadka Geekbench ayaa la cusbooneysiiyay si loogu daro soo gelinta cusub ee iPhone XS, oo leh 12 GHz A2,49 Bionic chip iyo 4 GB oo RAM ah.
Imaatinka softiweer cusub iyo alaabooyin cusub ayaa Apple ka dhigay baraarujin soo-saareyaasha, kuwaas oo ay tahay inay cusbooneysiiyaan barnaamijyadooda.
Vodafone wuxuu ku dhawaaqay OneNumber, eSIM wuxuu la jaan qaadayaa Apple Watch Series 4
Vodafone waxay ku dhawaaqeysaa adeeggeeda OneNumber si ay awood ugu yeelato inay u isticmaasho taxanaheena Apple Watch Series 4 isla lambarka taleefanka iyo heerka xogteena iPhone.
Isniinta soo socota, Sebtember 17, waxaan haysan doonnaa iOS 12 oo la heli karo, macOS Mojave 24
Intii lagu guda jiray Muhiimka maanta, ragga ka socda Cupertino waxay ku dhawaaqayaan taariikhaha rasmiga ah ee nidaamyada hawlgalka cusub ee qalabkooda oo dhan.
iPhone XR, dhammaan astaamaha, qiimaha iyo helitaanka
Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Apple iphone Xr sida qiimaheeda, astaamaha, iyo helitaan ahaan.
Kani waa iPhone Xs iyo iPhone Xs Max, taleefanka cusub ee cajiibka ah ee ka socda Apple
Apple ayaa soo bandhigtay war waxaana kuu sheegaynaa waxa ku cusub iPhone Xs iyo iPhone X Max oo leh midabyo cusub iyo horumarin badan.
Ma jiro calaamadda iPad-ka cusub ama Mac ee daadinta daqiiqado ka hor
Ma jiro calaamadda iPad-ka cusub ama Mac ee daadinta
Saacado unbaa naga xiga Apple's Keynote, midabbada cusub ee 6,1-inch iPhone Xr lagu suuq geyn doono ayaa soo ifbaxay.
Apple waxay xirtay Apple Store Online kahor imaatinka alaabooyin cusub galabta, waxaana kamid ah iphone-yada cusub.
Sannad ayaa hadhay si loo arko iPhone-ka 2019 laakiin Ming-Chi Kuo ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo inayan ku haysan doonin TrueDepth kamaradda dambe.
Dhowr saacadood ka dib bilowgii soo bandhigida Apple, waxaan aragnay qaar ka mid ah wararka ka soo ifbaxay iPhone Xs Max cusub iyo Apple Watch Series 4.
Apple waxay ku baahin doontaa dhacdada berri barta Twitter
Ka dib markii lagu sii daayay boggeeda rasmiga ah, Apple waxay ku dartay dariiq cusub oo ay ula socoto dhacdadiisa gaarka ah berri: barta rasmiga ah ee Twitter.
Apple ayaa ku guuleysatay abaalmarintii ugu horreysay ee Emmy iyada oo ay uga mahadcelineyso 'Carpool Karaoke'
Wiilasha Cupertino waxay helaan abaalmarin Emmy iyagoo uga mahadcelinaya baahinta qaabka Carpool Karaoke oo uu weheliyo James Corden Apple Music.
Tani waa waxa kaliya ee Apple ay ku soo bandhigeyso Muhiimka berrito
Waxaan kuu soo bandhigi doonnaa soo koobitaanka ugu fiican ee wax kasta oo Apple ay berri ku soo bandhigeyso Keynote, marka lagu daro iPhone, iPad Pro cusub ayaa la filayaa iyo wax ka badan.
nin dhalinyaro ah oo Mareykan ah oo doonayay inuu ka duulo Oakland kuna sii jeeday Maui ayaa hakad la geliyay duulimaadkiisa sababtoo ah waxaa la soo diray sawiro dhadhan xun.
Ming Chi Kuo wuxuu sameeyay saadaashiisa Muhiimka ah ee bisha Sebtember 12 wuxuuna hubiyaa in Apple Watch awood u yeelan doonto inay sameyso ECG.
Falanqeeyaha caanka ah ee Ming-Chi Kuo wuxuu tilmaamayaa iPad Pro oo leh USB-C iyo MacBook cusub oo jaban.
Barnaamijyo badan ayaa iibiya xogta goobta ay ka helaan macruufka
Tiro aad u tiro badan oo codsiyo ah ayaa la soo saaray oo hela oo ka iibiya isla markaana iibiya xogta agteena iOS ee shirkadaha tirakoobka.
Canshuuraha Donald Trump waxay saameyn ku yeelanayaan alaabooyin badan oo Apple ah
Tim Cook ayaa warqad uu soo diray kaga codsaday madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump inuu xal u helo kordhinta canshuuraha Shiinaha.
Apple waxay iibsataa xuquuqda dokumenteriga ee Boqoradda Maroodiga iyo filimka Wolfwalkers
Xog cusub oo nagu soo dhoweyneysa adeegga muusikada ee qulqulka Apple. Apple waxay iibsataa xuquuqda dokumentariga iyo filim animated ah.
Midowga Yurub wuxuu u oggol yahay Apple inay soo gabagabeyso iibsiga Shazam
Qaybta Tartanka ee Komishanka Yurub waxay si wanaagsan u qiimeeyeen iibsiga Apple iibkiina waa laga oggolaaday dhammaan waddamada EU.
Waxa u muuqda magacyada iPhone-ka cusub ee Apple soo bandhigi doonto Arbacada soo socota, iyo waliba qiimahooda, ayaa la sifeeyaa.
Soo ogow sida loo daawado qulqulka Muhiimka ah ee soo socda Sebtember 12 oo aan ku arki doonno iPhone Xs cusub.
Bogagga farshaxanka Apple Music hadda waxay muujinayaan qaab dhismeed guud oo ku saleysan sii deynta ay ku dhejiyeen si taxane ah.
Wiilasha Cupertino waxay balaarinayaan liistada liistada muusikada iyagoo ku daraya ilaa 116 dal oo cusub oo leh heesahooda ugu dhageysiga badan.
Apple wuxuu bilaabaa inuu ku garaaco Qualcomm dagaalka shatiga
Xaakimka ayaa go'aansaday inuusan qirin taxane sheegashooyin isdaba-joog ah oo ay soo gudbisay shirkadda Qualcomm oo ka dhan ah shirkadda Apple ee la xiriirta shatiyada
Roomba-ha cusubi waxay isku banneeyaan bacda qashinka u gaarka ah
Roomba waxay rabtaa inay joojiso dhibaatada faaruqinta aaladeeda markii taangigu buuxsamo, laakiin hadda waxaad lahaan doontaa mid kale oo dhab ah, shanta bac ee yuuro.
Apple waxay bilowday inay kobciso macruufka 12 iyada oo loo marayo barnaamijka Talooyinka
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabayaan dhiirrigelinta cusub ee iOS 12 iyagoo billaabaya ogeysiisyo iyada oo loo marayo barnaamijka Talooyinka ee dhammaan wararka.
George Garafano, oo ka mid ah afarta loo soo xaday tuugada sawirada laga qaado iCloud ee loo diro dadka caanka ah sanadii 2014-kii oo markii dambe lala wadaagay The Last eedeymo loogu soo xaday sawirada ku kaydsan iCloud dad ka badan 200 oo qof oo ay ku jiraan qaar caan ah ayaa la xukumay. ilaa 8 bilood oo xabsi ah.
Warbixin ay daabaceen qaar ka mid ah dadka ku dhow dhow maal-gashadayaasha Apple ayaa xaqiijinaya in koritaanka Apple Video uu dhab ahaantii noqon karo mid deg deg ah.
Nidaamka deegaanka ee iOS ayaa xukuma waaxda ganacsiga Mareykanka
Qalabka moobiilku wuxuu noqday hal aalad shaqo oo dheeri ah, gaar ahaan kuwa isticmaala kuwa dhif iyo naadir ah soo booqda xafiiska. Lahaanshaha Maraykanka, adeegsiga nidaamka hawlgalka ee IOS ee shirkadaha dhexdiisa ayaa kor ugu kacay ilaa 79%, tirooyinka sii kordhaya sanad kasta.
Prime epsodio ee xilli tobnaad oo aan ku falanqeyneyno wax kasta oo aan ku arki karno qodobka muhiimka ah ee usbuuca soo socda, fikrad iyo falanqeyn.
Barnaamijka Dhacdooyinka ee Apple TV ayaa hadda loo cusbooneysiiyey soo bandhigida iPhone-ka cusub
Barnaamijka Dhacdooyinka ee Apple TV horey ayaa loo cusbooneysiiyey soo bandhigida iPhone-ka cusub Sebtember 12, 2018
Apple waxay ka shaqeyneysay waxa noqon doona adeegiisa fiidiyowga u gaarka ah in muddo ah, iyadoo isku dayeysa inay lafteeda bedel u noqoto Apple-ga awoodda badan
IPad Pro 2018 Waxaa Laga Yaabaa In Yar Yahay Bezel Iyo Flatter Edges
Bixiyeyaashii ugu horreeyay ee ku saleysan macluumaadka xaday ayaa soo ifbaxay waxayna muujiyeen iPad Pro oo aan laheyn badhanka Guriga oo leh nidaamka Aqoonsiga Face iyo geesaha fidsan.
48% dadka isticmaala ayaa cusbooneysiin doona iPhone sanadkan
Sida laga soo xigtay Loupventures, rabitaanka iPhone ayaa sababay in ilaa 48% dadka isticmaala iPhone hadda ay cusbooneysiin doonaan sanadkan.
Instagram waxay ku xoojineysaa amniga shabakadeeda bulshada shaqooyin cusub
Agaasimaha guud ee Instagram ayaa ku dhawaaqay abuurista foom lagu maareeyo xaqiijinta koontada isticmaaleyaasha iyo hagaajinta amniga shabakadda bulshada
Ultimate Ears waxay bilaabaysaa BOOM 3 iyo MEGABOOM 3
Munaasabaddan awgeed, shirkadda 'Logitech sub-firm' waxay soo bandhigtay BOOM 3 iyo MEGABOOM 3, oo ka mid ah aaladaha ugu caansan shirkadda.
Cusboonaysiinta 'WhatsApp' waxay u oggolaaneysaa ikhtiyaarka inaad ku eegto faylasha faylasha badan ee nala soo diro ogeysiiska
Tani waa sida Sonos uu noo tusayo Amp, oo ah qalab isku dheelitiran, oo loogu talagalay faahfaahin dheeri ah taasna kor u qaadaysa isku xirnaanta.
Way muuqdaan. Qaar ka mid ah sawirrada iyo fiidiyowyada qaabka 3D oo na tusi kara muuqaalka iPad Pro 2018 ee Apple soo bandhigi doonto usbuuca soo socda
Youtube waxay hagaajineysaa isku xirkeeda iyo waxqabadkeeda iyadoo cusbooneysiinteeda cusub ee tvOS
Youtube ayaa lagu cusbooneysiiyay Apple TV App Store, iyadoo dhinac ka wanaajinaysa, isku xirkeeda wax ka qabashada iyo dhinaca kale, iyadoo hagaajinaysa waxqabadkeeda
Twitter sidoo kale wuxuu rabaa inuu ku biiro codsiyada farriinta wuxuuna tijaabinayaa qaab cusub oo leh tilmaamayaasha xaaladda.
Philips wuxuu ku biirayaa warka iOS 12 adoo isku daraya Siri Shortcuts ee nalalka Hue
Kadib imaatinka dhow ee dariiqooyinka cusub ee Siri ee iOS 12, ragga jooga Philips waxay xaqiijinayaan in guluubyadooda 'Hue' ay la jaan qaadi doonaan sheekadan cusub.
Apple waxay dhammeystireysaa Daraasadda Wadnaha ee Apple iyada oo u direysa sahanno ka-qaybgalayaasha
Jaamacadda Stanford iyo Apple waxay si wada jir ah uga qaybqaateen daraasadda wadnaha ee 'Apple Heart Study' oo gebogebo ku dhow, iyagoo la tashanaya ra'yiga ka qaybgalayaasha.
Si loo nadiifiyo jadwalka tweets-ka ee aan daneyneynin isticmaalayaasha, shirkaddu waxay ku siin kartaa liiska isticmaaleyaasha si looga baxo.
Shilkii ugu horreeyay ee uu la galo gaarigiisa madax-bannaan ayaa maalmo ka hor lagu wargaliyay hay'adaha ay khuseyso, iyada oo aan dhaawac shaqsiyeed soo gaarin
Maxay yihiin dhammaan dhibaatooyinka Apple Watch Series 4?
Waxaan falanqeyneynaa qeybta cusub ee Apple Watch Series 4, macnaha dhibaatooyinkiisa iyo wararka suurtagalka ah ee ay na siin karto.
Apple wuxuu sii daayaa iOS 12 Beta 12 si uu u hagaajiyo "Cusboonaysiinta Laheli karo" Cayayaanka
Apple wuxuu sii daayaa cusbooneysiinta iOS 12 Beta kaas oo hagaajiya cayayaanka daaqada oo tilmaamaya inuu jiro cusbooneysiin dhab ahaan jirin.
IPhone-kaaga miyuu kuu sheegayaa inuu cusbooneysiiyo iOS 12 Beta? Kaligaa ma tihid
Cilad ku jirta macruufka 12 Beta ee ugu dambeeyay wuxuu sababayaa banner xanaaq badan oo kuu sheegaya inaad cusbooneysiiso nooc cusub oo aan jirin u muuqdo si isdaba joog ah
Apple waxay ku bixin doontaa iyada oo loo marayo qulqulka Muhiimka ah Sebtember 12
Laga soo bilaabo Cupertino waxay ku xaqiijinayaan bogga rasmiga ah ee aan awood u yeelan doonno inaan raacno Qodobbada xigta ee tooska ah iyada oo loo marayo qulqulka Sebtember 12.
Tani waxay noqon doontaa Apple Watch Taxanaha cusub ee 4, oo soo daadanaya oo leh sawir rasmi ah oo Apple ah
Ragga 9to5Mac waxay ogaadaan sawirka waxa cusub ee Apple Watch Series 4 noqon doono: shaashad cusub iyo dhibaatooyin cusub oo aan dhammaad lahayn oo aan dhammaad lahayn.
Google Duo wuxuu hadda la jaan qaadayaa Apple iPads
Google waxay suurta gelisay in wicitaanada fiidiyowga loo sameeyo ipad iyadoo la cusbooneysiinayo nidaamkeeda Google Duo, oo ah aalad isgaarsiinta bulshada.
Bilowga Akonia Holographics, waa helitaanka cusub ee Apple. Waxay u sameeyaan lenses muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay
Maaha kii ugu horreeyay mana noqon doono kii ugu dambeeyay ee shirkadaha ama bilowga ay Apple iibsato ee la xiriira ...
Dragalia Lost waa Nintendo cusub oo loogu talagalay iPhone wuxuuna imaan doonaa Sebtember 27
Nintendo wuxuu xaqiijinayaa imaatinka RPG-ga oo leh midabbada bariga, Dragalia Lost, iDevices-keena bisha Sebtember 27.
Haa, Apple horeyba waxay u sharciyeysay naqshadeynta Tiyaatarka Steve Jobs ee Apple Park
Sannadkii hore shirkadda Cupertino waxay nagu soo bandhigtay dhacdo qiiro leh hoolka cusub ee ay ...
Apple waxay bixin doontaa kal-fadhiyo shaqsiyeed 30-daqiiqo ah si aan u baran karno inaan ku sawirno sawiradeena iPhone-ka
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen inay ku soo bandhigaan fadhiyo 30 daqiiqo ah gudaha Mareykanka si ay u bartaan sida wax looga beddelo sawirrada iPhone-keena.
Apple wuxuu bilaabayaa beta-cusub 11 ee iOS 12, kii seddexaad usbuuc gudihiis, oo gacanta ugu jira betas cusub oo loogu talagalay macOS Mojave iyo tvOS 12.
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu imaan karaa dhamaadka sanadka oo leh shaashad ballaaran iyo hagaajinta batteriga, oo la jaan qaadi kara kooxaha hadda jira.
Apple waxay bixisaa, oo ay weheliso hawl wadeenada, 200 GB oo iCloud ah iibsashada iPhone cusub
Dadka Mareykanka ah ee doonaya in ay badalaan iphone-ka waxay heli doonaan 200GB oo iCloud bilaash ah muddo laba bilood ah si ay sifiican ugu badalaan iPhone-yada.
Kuwani waa sababaha dadka isticmaala Android ay ugu beddelaan macruufka
Inta badan isticmaaleyaasha ka taga macruufka illaa Android waxay u sameeyaan si fudud maxaa yeelay waa jaban tahay, dadka isticmaala Android waxay fiiriyaan macruufka waxqabadka horumarka.
Apple waxay dooneysaa inay keydiso batteriga iyadoo la hagaajinayo tiknoolajiyada muujinta
Apple waxay qorsheyneysaa inay horumariso tikniyoolajiyadda soo bandhigida si loo badbaadiyo nolosha batteriga isla markaana loo helo khibrad adeegsade wanaagsan.
Telefoonada cusub ee OLED iPhones waxay la jaan qaadi karaan qalinka Apple
Xogtii ugu dambeysay ee ka soo baxday deegaanka soo saarista iPhone-ka cusub ayaa xaqiijinaysa in kan dambe uu la jaan qaadi karo qalinka Apple.
Qalabka A13 ee iPhone 2019 sidoo kale waxaa bixin doona TSMC
Sida laga soo xigtay macluumaadka ugu dambeeyay, Apple wuxuu dalban lahaa TSMC qalabka A13 ee iPhone kaas oo arki lahaa iftiinka sanadka soo socda: iPhone 2019.
Kiis loogu talagalay iPad Pro 2018 ee soo socda ayaa naga dhigaya mid aad u xiiso badan
Kiis cusub oo loo maleynayo iPad Pro oo Apple soo bandhigi doono Sebtembar ayaa naga dhigaya xiisaha walxaha aan la garanayn
Apple wuxuu soo bandhigayaa Kyoto Apple Store cusub kahor furitaankiisa Sabtida 25
Ragga ka socda Cupertino waxay soo bandhigaan waxa noqon kara kan ugu quruxda badan Apple Store, Dukaanka Apple ee Kyoto, dhaqanka iyo dhismaha hal meel.
Ku sagootin sheekada quraafaadka ah ee 'Onavo', Facebook wuxuu marayaa hoop-ka Apple isagoo dib ula noqonaya codsigiisa
Ragga ka socda Facebook waxay go'aansadeen inay baabi'iyaan VPN-kooda Onavo, sidaasna ay ku aqoonsadaan ururinta ay ka sameeyeen xogteenna barnaamijka.
Haddana kiis kale oo ah sida Apple Watch uu uga hortagi karo dhibaatooyinka caafimaad
Tifatire Mareykan ah ayaa xaqiijiyay in taleefishinkiisa Apple Watch uu ka hortagay shil caafimaad sababtoo ah aaladda ayaa lagu ogaaday cilladaha ku dhaca garaaca wadnihiisa.
Komishanka Yurub ayaa u oggolaan doona Apple inay iibsato Shazam
Soo iibsiga Apple ee Shazam waxay umuuqataa inuu leeyahay iftiin cagaaran oo ka socda Komishanka Yurub iyo Agaasinka Guud ee Tartanka.
IKEA si ay u bilawdo fiilo ku habboon HomeKit qiimo jaban
Iswiidhishka ayaa markale hal-abuurnimo leh, Tradfri kala duwan oo ay weheliso IKEA HomeKit ayaa sii kordheysa iyadoo bixineysa fiilo xariif ah qiimo jaban
IPhone 7 SE ayaa madaxa dib u siiya si uu shaashadda yar u haysto
Soosaarayaasha iyo falanqeeyayaashu waxay soo jeedinayaan in Apple ay bilaabi doonto daabicis jaban oo fitamiin ah ee iPhone 7 iyada oo ujeedadu tahay cusbooneysiinta kala duwanaanta SE.
Microsoft waxay si rasmi ah u shaacisay in Minecraft: Education Edition, oo ah barxadda waxbarasho ee Minecraft, ay imaan doonto iPadka deyrta.
Sii qabsashada iphone-yada cusub waxay bilaaban doontaa bisha Sebtember 14
Apple ayaa soo bandhigi doonta noocyada cusub ee iphone-ka ee sanadkan bisha Sebtember. Waxaa jiri lahaa seddex nooc oo iPhone ah oo leh naqshadda iPhone X ee 2017
Ha u oggolaan in qaafiyadda la joojiyo! Apple wuxuu sii daayaa macruufka 12 Beta 9 loogu talagalay Soo-saareyaasha
Ka dib markii la sii daayay xag-jirnimada nooca 12-da beta ee iOS 12 si loo xalliyo dhibaatooyinka noocii hore, Apple wuxuu sii daayaa iOS 9 Beta XNUMX.
Apple ayaa 25.000 oo barnaamijyo iyo khamaar ah ka saareysa App Store-ka Shiinaha
Sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka, in ka badan 25.000 oo codsiyo Shiine ah ayaa laga tirtiray App Store ka dib markii ay jabiyeen xeerarka.
Apple waxay diiwaangelisaa lix nooc oo Apple Watch cusub ah oo Yurub ah
Wax ka yar bil ayaan ka maqanahay Apple soo bandhigida iphone-keeda cusub, laga yaabee iPads cusub iyo Macs, iyo xaqiiqdii Apple Watches cusub. Dhacdada Apple waxay diiwaangelisay lix cusub oo Apple Watch ah kuwaas oo noqon doona kuwa aan ku arki doonno soo bandhigida bisha Sebtember sida taxanaha cusub ee 4
Macruufka 12 miyuu fiicnaaday inta udhaxeysa beta 1 iyo beta 8? Fiidiyowgaan ayaa tirtiraya shakiga
Waxqabadka iOS 12 miyuu fiicnaaday inta udhaxeysa beta-hore iyo tan sideedaad? Waxaan ku eegaynaa fiidiyow si aad uhesho gabagabadaada.
Maalintii masiiriga ahayd ayaa timid, Netflix ayaa xayeysiis dhex dhigi doonta taxanaha aan daawaneyno
Hadda Netflix waxay bixin doontaa xayeysiis inta udhaxeysa dhacdooyinka Netflix sida ku cad xogaha ugu dambeeyay.
Batariga iPad-ka ayaa ku qarxa gudaha Apple Store-ka Amsterdam
Si naxdin leh ayaa u qarxiya batariga iPad-ka ee lagu soo bandhigay Apple Store ee Amsterdam waxayna ku qasbeysaa bakhaarka in loo banneeyo si ay uga qeyb galaan dadka ay dhibaatadu saameysey.
Niantic Kids, Pokémon GO cusub oo isha ku haya kuwa yaryar
Niantic Kids waa aaladda u oggolaan doonta waalidiinta inay xakameeyaan koontada carruurtooda Pokémon GO iyo maaraynta macluumaadka ay wadaagaan.
Qorshayaasha keydinta Google One waxay bilaabayaan inay kasoo muuqdaan Mareykanka
Google One waa nidaamka keydinta cusub ee Google. Waxay bilaabatay in lagu iibiyo dalka Mareykanka qorshooyinka ay bixiyaanna waa kuwo aan laga adkaan karin.
"Loop Disease" qalad kale oo weyn oo saameeya iPhone 7
Hadda waxa loo yaqaan "rabitaanka loop" ee iPhone 7, oo dhibaato ah oo ka dhigaysa aaladda aan waxtar lahayn oo sida muuqata Apple horey u ogaa.
Apple ayaa lagu eedeeyay Japan dhaqan anshax xumo ah
Japan, maanta, waa waddanka saddexaad ee soo saara dakhliga ugu badan jeebabka Apple. Gudaha…
Denon HEOS Cinema HS2, bar kale oo dhawaaq leh oo leh AirPlay 2
Hadda shirkadda caanka ah ee caanka ah ee Denon ayaa sidoo kale ku biirtay soo saarista alaabooyin la jaan qaadaya AirPlay 2 iyada oo loo marayo barkeeda cusub ee codka.
Isbedelada ka dib Twitter, macaamiisha sida Tweetbot wax macno ah malahan
Hadda ka fiirsashada isbeddelada ay sameysay Twitter, wax macno ah malahan in la isticmaalo macaamiisha dhinac saddexaad.
Apple ma bilaabi doonto wicitaanada Kooxda FaceTime ee nooca hore ee iOS 12
Apple waxay go'aansatay inay ka saarto Wicitaanka Kooxda ee FaceTime qaybta hore ee macruufka 12. Shaqeynta waxaa la sii deyn doonaa deyrta sanadkan.
Tweetbot waa mid ka mid ah dhibbanayaasha waaweyn ee isbeddelada ku yimid barta 'Twitter API'
Xaqiiqdii, maahan dhibanaha kaliya ee isbedeladan lagu hirgeliyay Twitter API, laakiin waxay ka timid ...
Apple hadda waxay bilaabeysaa beta 8 ee iOS 12 ka dib markii ay ka laabatay qaybtii hore cillad awgeed
Apple ayaa soo saartay beta sideedaad ee iOS 12 xalinta khaladaadka waxqabadka culus ee ay bixiso iOS 12 beta 7.
Ming Chi Kuo wuxuu saadaashiisa ka dhigayaa Apple dhigista muraayadaha xaqiiqda ah ee la kordhiyay sanadka 2020 iyo gaariga Apple inta udhaxeysa 2023 iyo 2025
Malala Yousafza, ayaa buuxisa Tiyaatarka Steve Jobs ee ku yaal Apple Park
Inbadan oo idinka mid ah waad hubtaa inaad durba ka warqabto macnaha sanduuqa Malala. In yar in la dhigo ...
Iphone-ka sanadkaan wuxuu la jaan qaadayaa qalinka Apple wuxuuna gaarayaa 512 Gb
Macluumaadka ugu dambeeya wuxuu na siinayaa faahfaahin ku saabsan qeexitaannada iyo astaamaha saddexda iphone ee imaan doona 2018.
Wax walba waxay muujinayaan in AirPower ay ku kacayso 149 doolar
Apple ayaa sii wadaysa inay dib u dhigto AirPower iyadoon bixin sharraxaad isku xiran, hase yeeshe wax walba waxay muujinayaan in sicirkeeda ugu dambeeya uu gaarayo $ 149.
Apple wuxuu ka laabtay macruufka 12 Beta 7 arrimo la xiriira waxqabadka
Dhowr saacadood ka dib markii ay soo saartay shirkadda cusub ee loo yaqaan 'Beta 7 Apple' ayaa dib ula noqotay sababo la xiriira dhibaatooyin xagga waxqabadka ah iyo gaabis xagga codsiyada ah